:: My Little World ::: September 2010
Literary Talk in Singapore - 2010
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက စာပေဟောပြောပွဲသွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမအကြိမ်တုန်းက မသွားဖြစ်ဘူး၊ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရောက်ဖြစ်တယ်၊ စာရေးဆရာများရဲ့ ပြောတာချက်တွေ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
From Literary Talk in Singapore - 2010
စာရေးဆရာ - လယ်တွင်းသားစောချစ်
စာရေးဆရာ/ကဗျာဆရာ - မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)
စာရေးဆရာ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ဟောပြောနေစဉ်မှာ ကျွန်မ အသံသွင်းယူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟောပြောချက် အပိုင်းတွေပါ။
လူငယ်တွေအတွက် ကဗျာ တစ်ပုဒ် ( အာရုံကြို )…
အခြေအနေ မကောင်းရင်၊ မငြိမ်းချမ်းရင်......... ကလေးတွေလည်း မပျော်နိုင်ပါဘူး။ ကလေးများအားလုံး ပျော်နိုင်ကြပါစေ။
ရသစာပေအကြောင်း.... ရှေးဟောင်းကဗျာတစ်ပုဒ် ရွတ်ဆိုရင်း ရှင်းလင်းပြခဲ့တယ်။
နာဂစ်မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုလည်း အခုလို…..
လူသိထင်ရှား သူရဲကောင်းတွေရှိသလို၊ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူမသိ သူမသိ သူရဲကောင်းများစွာလည်း ရှိကြောင်း ပြောကြားရင်း၊ ၂၀၀၉ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မုန်တိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ လူပေါင်း ၃၀ ကျော်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ရင်း အသက်စွန့် သွားတဲ့ ၁၈ အရွယ် လူငယ် Muelmar Magallanes အကြောင်းနဲ့မြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှ လူမသိသူမသိ ကြယ်တစ်ပွင့် မာရီလှတော အကြောင်းကို ခုလို… ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တရားကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းနဲ့သူရဲကောင်းဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုး၊ သူရဲကောင်းဆိုတာ အဲဒါပါပဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ဟောပြောကြားချက်တွေကို အသံမဖမ်းလိုက်မိတာ အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးပိတ်. အနှစ်ချုပ်စကားတွေနဲ့ အတူ… ပန်းတိုင်ရှိရာ နဲ့ငှက်တို့ တေး ကဗျာ နှစ်ပုဒ် ကို အခုလို….
တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုရမလား၊ ကျွန်မ အသံသွင်းယူမထားဖြစ်တဲ့ ဟောပြောချက်အပိုင်းတွေကို ညီညီသံလွင်က သူ့ ရဲ့ Facebook က Notes မှာ ခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
* * * ဒုတိယအကြိမ် စင်္ကာပူစာပေဟောပြောပွဲ (အပိုင်း ၁)- ညီညီသံလွင်
သဘောကျမိတဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်မလုပ်တဲ့ "ကြွက်ခုတ်တဲ့ နွား" အကြောင်း ဆရာအော်ပီကျယ် ဟောပြောနေပုံပါ။
ဆရာအော်ပီကျယ် ဟောပြောတဲ့အခါမှာ သူ့ ရဲ့ ကာတွန်းတွေကိုပါ Projector နဲ့ ပြသရင်း ရှင်းပြ ဟောပြောသွားတာဖြစ်လို့သူတပါးကို ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆို အသံသပ်သပ်၊ ရုပ်သပ်သပ် ထက်စာရင် ရုပ်ရောအသံပါ ပါအောင် video ရိုက်ကူးထားပါမှ ပိုပြီးသင့်တော်တယ် ထင်မိခဲ့တယ်။ တချို့ နေရာလေးတွေမှာ ကြိုးစားကြည့် ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မိနစ်ပိုင်းနဲ့ အမျှ လှုပ်ရှားရွေ့လျားနေတဲ့ ဦးခေါင်းနှစ်ခုကို လွတ်အောင်ရှောင်ရိုက်ယူဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူလို့လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတချို့ ပဲ ရိုက်ဖြစ်တယ်။
ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ ဟောပြောချက်များကိုလည်း ညီညီသံလွင်က အခုလို ရေးသားထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
* * * ဒုတိယအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ (အပိုင်း ၂) - ညီညီသံလွင်
ခုလို ပြန်လည်မျှဝေခွင့်ပေးတာ ကျေူးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း (စာရေးဆရာတွေ ဟောပြောတာမပါ) တခြားမြင်တာ၊ ကြားတာ၊ တွေးမိသွားတာသာ ရေးမယ်ဆို ရေးစရာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုရက်ပိုင်း လူပင်ပန်း၊ စိတ်ပင်ပန်းနဲ့ မို့သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီစာပေဟောပြောပွဲအကြောင်း ပြန်ရေးဖို့ စိတ်ကူး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် "အသံသွင်းထားတာ မျှပါဦးဗျာ" ဆိုတဲ့ Mr.DBA စကားကြောင့် Audio File လေးတွေမျှဝေဖြစ်အောင်လို့သာ နည်းနည်းရေးလိုက်တာပါ။ တခြားကိစ္စတွေတော့ သူများရေးတာတွေပဲ လိုက်ဖတ်တော့မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/30/2010 12:36:00 PM3comments
တစ်ပတ် ၁ ကြိမ်၊ တစ်လ ၄ ကြိမ်၊
၂၀၁၀ - တစ်နှစ်လုံးနေမှ ၅၂ ကြိမ်သာ ကျရောက်သော တနင်္လာ။
Posted by Nay Nay Naing at 9/27/2010 10:55:00 AM5comments
အခုနက လူသံတွေဆူညံ ညှော်နံ့ တွေရလို့ကြည့်လိုက်တော့ တိုက်အောက်မှာ လူငယ်တွေ ဖယောင်းတိုင်းတွေနဲ့မီးထွန်းနေပြီး၊ ကလေးတွေ မီးပန်းတွေနဲ့ဆော့နေတာ တွေ့မိတယ်။ သူတုို့ တွေ မီးထွန်းနေကြတာ ခနပါပဲ၊ သိပ်မကြာဘူး။
ပုဇွန်မျှားတဲ့အကြောင်းအတွက် ဓာတ်ပုံတွေမလုပ်ရသေးဘူး။ သူတို့ တွေ မီးထွန်းနေကြတာတွေ့ ပြီး သီတင်းကျွတ် မှာ ဆော့ရတာ ပြန်အောင့်မေ့သွားမိပါသေးတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/25/2010 10:46:00 PM2comments
မြန်မာပြည်ပြန်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွားပြီး ကြာဇံသုတ်စားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာပဲ မြန်မာ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားဖြစ်တာပါ။ နာမည်က အဲလို မှန်တယ် ထင်တာပဲ။ အရင်က တခါမှ မစားဖူးဘူး၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စားတာတွေ့ တာနဲ့စားကြည့် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကို ရောက်ဖူးတဲ့ အခေါက်အရေအတွက်က မများသလို၊ အဲဒီဈေးထဲက စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြိမ်ကလည်း လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရနိုင်တယ်။ ဒီတော့ တကယ်ရှိမရှိ၊ ပုံစံအရသာတူလား၊မတူဘူးလား သေချာမသိ၊ မပြောတတ်ပါ။
ဘာတွေပါလဲဆို ကြာဇံကို ကြာညှို့နဲ့ နယ်၊ ကြော်ထားတယ် ပြောမရဘူး ဆီမပါသလောက်နဲ့ လှိမ့်ထားတာကို မကျည်းသီး အနှစ်အချဉ် စမ်းထားတယ်။ ဂေါ်ဖီနည်းနည်းလည်း ပါတယ်။ အစာပလာက ၀က်သားတုတ်ထိုးနဲ့နံနံပင်အုပ်ပေးတယ်။ မဆိုးဘူး။ စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ ၀က်သားတုတ်ထိုးက ကျွန်မအကြိုက် အူမကြီးနဲ့လျှာဖြစ်နေလို့စားလို့ ကောင်းတာလားတော့ မသိဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် အခုပဲ ရန်ကုန်ပြန် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွားပြီး စားကြည့်ချင်စိတ်တောင် ပေါ်တယ်။
Thanks to AWM and His Beloved Wife,Chaw for dinner ;)
To nyimuyar: အင်းလေးမှာ စားတာပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 9/24/2010 01:48:00 PM7comments
Weekend Activities (2010-09-11)
ခုလတွေမှာ ပုံမှန်ဆို ကြားရက်တွေဆို အလုပ်နဲ့အိမ်၊ ပိတ်ရက်ဆို အိမ်မှာနေ။ ဒါကတော့ အပြင်ထွက်ဖြစ်တဲ့ ပိတ်ရက်တစ်ခု။ အဲဒီအပတ် သောကြာနေ့ က Hari Raya Puasa မို့ရုံးတွေ ပိတ်တယ်။ Weekend နဲ့ ဆက်သွားတော့ ၃ ရက်ပိတ်ရက်တော့ Long Weekend လို့ ခေါ်မလား၊ တကယ်ဆို ၃ရက်တည်းပိတ်တာ နည်းလွန်းပါတယ်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေကို ကြားမှာထား ရှေ့ နှစ်ရက်ပိတ်၊ နောက်နှစ်ရက်ပိတ်တဲ့ Long Weekend မျိုး တစ်လ တစ်ခါလောက်ရမယ် လိုချင်တယ်။
အဲဒီပိတ်ရက် သောကြာနေ့ မှာ အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စနေနေ့ မှာ တစ်နေကုန် အပြင်ထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးသွားတာ တိရစ္ဆာန်ရုံ။ IBM Day @ Zoo ဆိုပြီး အခမဲ့ ၀င်ခွင့်လက်မှတ်ရလို့ သွားဖြစ်တာပါ။ ကျွန်မကတော့ IBM မှာအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
IBM မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အသိတစ်ယောက် လိုက်မယ်ဆို Tickets တွေယူထားမယ်ဆိုတာနဲ့တခြားသူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူ သွားဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါကတော့ သုံးခေါက်ချိုးထားတဲ့ ၀င်ခွင့်လက်မှတ်။ ဒီဓာတ်ပုံကိုက Bus ပေါ်မှာ ရိုက်ထားတာ။ သဘောကောင်းရုပ်ချောအပြောချိုတဲ့ ညီမငယ်တစ်ဦးက လက်မှတ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အဆင်ပြေအောင် ကိုင်ထားပေးခဲ့တယ်။ (မုန့် ဝယ်ကျွေးသင့်ပြီ)
IBM Day @ The Zoo (Saturday - 2010-09-11)
From IBMDay @ The Zoo
အခုလို လို ကြိုတင်မှာထားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီမှာ No 6. က အချက်ဖတ်ပြီး ကိုယ်တွေက ကျင့်သားရနေပြီလို့ တောင်ပြောမိကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလို ကြိုသတိပေးတာမလဲ မမှားပါဘူး။ လာမယ့်သူတွေက လူမျိုးစုံ။ မိသားစုနေ့ ဆိုတော့ ကလေးတွေပါ ပါလာခေါ်လာကြမှာ။ တော်ကြာ ဟိုမှ ခြင်ကိုက်လို့ဟိုကပြန်လာပြီးနောက် ဖျားကြပြီး ဆေးကုရပါတယ် ဆိုပြီး တရားစွဲနေရင် မလွယ်ဘူး။ တချို့နိုင်ငံက လူတွေက ဘာဖြစ်ဖြစ် တရားစွဲလိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ။ ဒီမှာ ကြည့်။
Kranji ထိရထားစီးသွားပြီး အဲဒီကမှာ IBM က စီစဉ်ပေးထားတဲ့ Shuttle Bus စီးသွားတာပါ။ Zoo မရောက်ခင် အတော်ဝေးဝေးကတင် ကားလမ်းမဘေးမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားတွေကြည့်ပြီး အတော်လူများမယ်ဆိုတာ သိသာနေပြီ။ ပိတ်ရက် ၃ ရက်၊ Hari Raya ၊ IBM Day ဆိုတော့ လူအရမ်းများတာ မဆန်းဘူးဆိုရမယ်။
Ticket ၀ယ်တဲ့နေရာမှာ လူတန်းက အတော်ရှည်တယ်။ တော်သေးတယ် IBM Ticket နဲ့ ဆိုတော့ တန်းစရာမလိုဘူး။ ဘေးပေါက်ကနေ ၀င်ရတယ်။ မ၀င်ခင် တစ်ယောက် ရေးဘူးတစ်ဘူးစီလည်းပေးတယ်။ ကားပေါ်မတက်ခင် ၀ယ်လာတဲ့ ရေဗူးဖိုးတောင် နှမျောသွားရတယ်။ ရောက်တဲ့အချိန်က ၁၁ နာရီကျော်ပြီဆိုတော့ တခြား ဘာညာကြည့်ဖို့ ထက်စာရင် နေ့ လည်စာ သွားစားဖို့ ပဲ စိတ်သန်နေကြပြီ။ ဗိုက်ဆာနေပြီ။ ရေခဲမုန့်Popcorn လည်းရမယ်တဲ့။ Ticket ထဲမှာပါတဲ့ Pavilion by the Lake ဆိုတဲ့နေရာ အမြန်သွားကြတယ်။ ဒါတောင်မှ လမ်းမှာ ဓာတ်ပုံ ၁၄-၅ ပုံ ရိုက်ဖြစ်အောင် ရိုက်ကြသေးတယ်။ လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က လည်း တရိစ္ဆာန်ကြည့်ဖို့ မဟုတ်ဘူး၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တဲ့။ တကယ်လည်း ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော် ကြပါပေတယ်။
အဲဒီနေ့ က တိရစ္ဆာန်ရုံကို ရောက်ခဲ့ကြောင်း သက်သေတစ်ခု။
တခြားသူတွေ အသာထား IBM ကလူတွေ ဘယ်လောက်များလဲဆို ဒီအောက်ကပုံမှာကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။ တကယ့်ကို အေးအေးဆေးဆေး အခင်းတွေယူလာပြီ ထိုင်နေကြတာ။ မိသားစုတွေ အများကြီး၊ ကလေးတွေလည်းအများကြီး။ ကလေးတွေအတွက် သီးသန့် အစီအစဉ်တွေလည်း ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တောင် နေ့ လည်စာစားရင် ခဏတဖြုတ်ထိုင် ကြည့်ခဲ့တယ်။ မိဘတွေ၊ကလေးတွေ အသံတွေဆူညံနေပေမယ့် သူတို့ တွေက ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကြီးပါ။
ဘာတွေစားခဲ့လဲဆို.. ပထမဆုံး Ticket ထဲမှာပါတဲ့ လက်မှတ်လေးဖြတ်ပြီး Popcorn ယူ စားတယ်။ ချိုတယ်၊ ပုံမှန်ဆို စားဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်ထဲ ထည့်ရင်းထည့်ရင်း ဘယ်လိုကုန်သွားလဲတောင် မသိလိုက်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ နေ့ လည်စာ သွားယူစားတယ်။ နေ့လည်စာက KFC။ တစ်ယောက် တစ်ဗူး။ ဒါလည်း ဗိုက်ဆာလို့ လားမသိဘူး အကုန် ကုန်သွားတာပဲ။ လျှောက်မကြည့်ခင် အားဖြည့်ရမယ်လေ။ ပြီးတော့ Coke သောက်၊ ရေသောက်။ အားအင်အပြည့်နဲ့လျှောက်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
အဲဒီနေ့ က ရာသီဥတုက သာယာတယ်။ မိုးမရွာဘူး။ နေပူလို့ တောင် အိုက်စပ်စပ်ဖြစ်သေးတယ်။ အိုက်နေမယ် ဆိုပြီး ၀ါသနာရှင် ညီမငယ်တစ်ယောက်က ဆံပင်တွေကို ဖွတ်မြီးခေါ်လား၊ ကြက်ဆံမြီးခေါ်လား အဲဒါလာ ကျစ်ပေးတယ်။ အင်း.. ဆံပင်သွားညှပ်ရ အုံးမယ်။ ကဲ အားလုံးပြီးတော့ သွားကြမယ်ဆို.. မသွားရသေးဘူး၊ ရေခဲမုန့် စားရင် ထိုင်ပြီးအနားအရင် ထပ်ယူကြတယ်။ ရပ်နေရင်း ဘယ်ကစကြည့်မှာလဲ မေးမိတော့ အပေါ်မှာပြောသလို ဘာကောင်မှ ကြည့်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားကြဘူးတဲ့။
တိရစ္ဆာန်ရုံလာပြီး တိရစ္ဆာန်တွေ မကြည့်ရဘူးဆိုတော့ စိတ်ဆိုးချင်စရာ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး။ ဒီနေရာကို ဒါပထမ ဆုံးအကြိ်မ်ရောက်ဖူးတာမှ မဟုတ်တာ။ အခုအကြိမ်နဲ့ ဆို ၃ ကြိမ်မြောက်။ ပထမ နဲ့ဒုတိယအကြိမ်တွေက အကောင်တွေက သေသေချာချာ ကြည့်ထားတယ်။ Singapore Zoo ဘယ်လောက် အရွယ်အစားရှိတယ်ဆိုတာကို ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေ သိမှာပါ။ ဒီလိုနေရာကို ၃ ခေါက်မြောက်ဆိုတော့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ အကောင်တွေဟာ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေသာ ဖြစ်မယ်ဆို သူတို့ တွေလည်း ကိုယ့်ကို မှတ်မိနေလောက်တယ်။ စိတ်ဒုံးဒုံးချ လိုက်ပါတယ်။ ဘာကောင်မှ မကြည့်တော့ဘူး၊ ဓာတ်ပုံတွေပဲ လိုက်ရိုက်ပေးတော့မယ်။
ဒီနေရာမှာ ပိုစ့်ပေးကောင်းတဲ့ ညီမငယ်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ Camera ချိန်လိုက်တာနဲ့လာထား၊ ပုံစံမထပ်တဲ့ အိုက်တင်မျိုးစုံ ပေးပြီး သားပဲ။ ရိုက်သမျှပုံတွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ပုံပါနေတော့ ဒီမှာ မတင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီနေ့ က ကျွန်မ camera မှာ အားလုံးရိုက်တာ ၂၅၀ နီးပါ။ ကိုယ့်လူတွေ မပါတာ ၁၀ ပုံလောက်ပဲ ရှိတယ်။ စိတ်လက်ပေါ့ပါး မြူးနေတဲ့ မော်ဒယ်မမလေးတွေကို လိုက်ရိုက်နေရတော့.. ဟိုးအရင်လို လူမပါပဲ တခြားစိတ်ကူးထဲ မျက်စိထဲတည့်တာလေးတွေ လိုက်ရိုက်ဖို့လက်က ထပ်မလှုပ်ချင်တော့ဘူးလေ။
ဒါကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ အနားကပ်လာတဲ့ ကလေးလေးပါ။ ရိုက်ကွင်းထဲ ၀င်လာလို့သူ့ ပုံပါ ရိုက်ယူထားလိုက်တယ်။ ခေါင်းပေါ်က ဦးထုပ်မှာ ရေးထားတယ်။ Holidays!!..
ဒါကတော့ လှမ်းမြင်လိုက်တဲ့ အဝေးက အရာတစ်ခု။ Boat Rides @ the Zoo ဆိုတာ ထင်တာပဲ။ သေချာ မသိဘူး။ တခါမှ မစီးဖူးဘူး။
တကယ်ပါ။ အဲဒီနေ့ က တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ မျောက် ၄-၅ ကောင်၊ ဆင် ၂ ကောင်၊ သားပိုက်ကောင်တွေကို အဝေးကနေ၊ ဘာငှက်မှန်းမသိတာ ၂ ကောင် ဒါလားပဲ သေချာတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ ခြင်္သေ့ မမြင်ခဲ့ရဘူး။ ကျားကိုတော့ ကျောက်ရုပ်ကျားကြီးနဲ့ကတ်ထူးပြားကျားဖြူ အရုပ်ကြီး မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အကောင်တွေရှေ့ မှာ လူတွေက ကျိတ်ကျိတ်တိုးဆိုတော့ လူတွေကို တိုးခွေ့ ဝင်ကြည့်ဖို့ လည်း စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။
ဒါတွေက ဒီတစ်ခေါက် တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ ကျွန်မ မြင်ခဲ့တဲ့ အကောင်တွေ။
အဲဒီနေ့ က တရိစ္ဆာန်ရုံမှာ အကြာကြီး မနေဖြစ်ဘူး။ လမ်းလျှောက်တာလည်း ၀ါသနာမပါကြ၊ အကောင်တွေကြည့်ဖို့ လည်း စိတ်မ၀င်စား၊ ချိန်းထားတာလေးတွေ ရှိကြတယ်ဆိုတော့ ပြန်ဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့ ပထမဆုံး ထွက်တဲ့ Bus (3:30 PM) နဲ့ ပြန်လိုက်ခဲ့တယ်။ ချိန်းတဲ့သူက ပြန်တာဖို့ စိတ်ကူးတာ၊ ဘာမှမချိန်းထားတဲ့ ကျွန်မတို့ ကတော့ ပြန်ဖို့ စိတ်မကူးသေးပဲ Bugis ဘက်သွားဖြစ်တယ်။ Bugis Street Market လည်း ရောက်တယ်။ Bugis Street အကြောင်းသိချင်ရင် Mr.DBA - Singapore 93 (ဘူးဂစ်လမ်းကြားဈေး) မှာ ဖတ်ပါ။
Bugis Street ကို အရင်က ရောက်ဖူးတယ်။ အဲဒီအနားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကရောက်တာလဲ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ့ ရောက်တာပါ။ အခုတစ်ခေါက်တော့ အသစ်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်ကဆိုင်တွေ သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် အဲဒီဈေးတန်းထဲဆိုင်တွေို့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် သေချာ လျှောက်ကြည့်ဖြစ်လို့ လည်းပြောနိုင်တယ်။ တစ်ခုသတိထားမိတာ အဲဒီမှာ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေက လူအချို့အတော်ရိုင်းတယ်။ စကားပြောတဲ့ လေယူလေသိမ်းနားထောင်ရတာ ပြည်ကြီးက တရုတ်တွေ ထင်တာပါပဲ။ ကိုယ်ကပဲ ရိုင်းတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့တာလားတော့ မသိဘူး။
Bugis Street ဟိုကြည့်ဒီကြည့် နည်းနည်း လုပ်ကြပြီး Golden Miles ကို ညစာစားဖို့ဆက်သွားကြတယ်။ အစားအသောက်ပုံတွေလည်း ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဗိုက်ဆာနေတော့ စားဖို့ ပဲ စိတ်ထဲရှိတယ်။ စားတာတွေကလည်း အထူးအဆန်းတွေမှ မဟုတ်တာ။ စားလေ့ရှိတာတွေပဲ စားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ မစားဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သရက်သီး ၀ယ်စားတယ်။ အားလုံးလည်းပြီးရော ဗိုက်လည်းပြည့်၊ မိုးလဲချုပ်နေတာမို့ရထားကြီးစီးပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
Weekdays ဆိုအလုပ်သွား၊ Weekend ဆို အခန်းတွင်းအောင်းနေတာ အတော်ကြာပြီ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အိမ်မှာပဲ မနေပါနဲ့အပြင်လေးဘာလေး ထွက်ပါအုံးဆိုတဲ့ စကား နားထောင်ဖို့ကြိုးစားရပါအုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/22/2010 11:06:00 AM4comments
ဒီနေ့ နေလို့ သိပ်မကောင်းတာနဲ့နေ့ လည်စာသွား မစားတော့ဘူး။ အစာ စားချင်စိတ်မရှိဘူး။ မနေ့ မနက်ပိုင်းက မိုးမိသွားပြီး အ၀တ်စိုတွေနဲ့နေလိုက်ရတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ နေ့ လည်စာ စားချိန်တိုင်း အပြင်ထွက်စားဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးမယ့်သူ ဒီနေ့စောစောအိပ်သွားတာကြောင့်လည်း ပါလိမ့်မယ်။ ဖေ့ဘုတ်ကို ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတာနဲ့အရင်နေ့ တွေ နေ့ လည်စာ စားတုန်း ရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံ တချို့ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ထမင်းစားချင်စိတ်များ ပေါ်လာ မလားလို့ ။
ဒါက South Birdge Road ပေါ်မှာရှိတဲ့ "Macpherson BBQ Seafood" ဆိုတဲ့ ဆိုင်က။ အဲဒီဆိုင်က BBQ Stingray နဲ့Sambal Sotong နာမည်ကြီးတယ်။ အလုပ်က လူတချို့အဲဒီဆိုင်ကို သိပ်ကြိုက်၊ ကျွန်မကတော့ သူတို့ နဲ့ နေ့ လည်စာ သွားစားမှသာ အဲဒီဆိုင် ရောက်ဖြစ်တာပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ မသွားဖြစ်ဘူး၊ အဲဒီဆိုင်က နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ဆို လူများတယ်။ အပေါ်က Set က S$5ပတ်ဝန်ကျင်ပဲ။ 4.80 လား 5.50 လား မသိဘူး။
ဒါကတော့ အသစ်ပြန်ဆောက်ထားတာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ China Square Food Centre မှာရှိတဲ့ Korea ဆိုင်က။ Saba Fish Set။ ကိုရီးယားစာဆို အကင်က လွဲရင် တခြားဟာ မစားတာများပေမယ့် ဒီလို Saba Fish Hotplate တော့စားလို့ ရတယ်။ ဈေးနှုန်းက S$ 5.0-6.0 ကြားပဲ။ အဲဒီ Food Centre မှာသွားစားရင် အဲဒါပဲမှာစားဖြစ်တာ များတယ်။ စားနေကြလို့ ပြောရနိုင်ပေမယ့် အခုပြန်စဉ်းစားတော့ ဈေးနှုန်း သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။
အပေါ်က Korea ဆိုင်ကပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် အဲဒီသွားစားဖြစ်တုန်း Item အသစ်ဆိုပြီး တခြားသူတွေ မှာတာနဲ့လိုက်မှာ စမ်းပြီး စားကြည့် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပုံမှန်ဆို အဲဒီ Korea ဆိုက Saba Fish ပဲစားလေ့ရှိတာ များတယ်လေ။ အခု အဲဒီ ကြက်သားကြော်ကတော့ S$6 ကျော်တယ်။ 6.50 ထင်တယ်။ စားရတာ မဆိုးပါဘူး။ ကင်ချီ ထမင်း။ ရိုးရိုးထမင်းမှာလည်း ရတယ်။ ကျွန်မ စားတာတော့ ကြက်ကြော်ရိုးရိုး။ ငရုတ်ရည်လောင်းထားတဲ့ အစပ်ကြော်မှာလည်း ရတယ်။
ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ အစားအသောက်ဆိုင်တွေ များသလို၊ အရှေ့ အနောက် တောင်မြောက် ၁၀ မိနစ် လမ်းလျှောက်မယ်ဆို လူသိများတဲ့ အစားအသောက်ဆိုင်တွေ အများကြီးပဲ။ မြို့ လည်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ကောင်းတယ်ပြောမလား မကောင်းဘူးပြောမလား၊ အစားအသောက်မျိုးစုံရှိတယ်(ဆိုင်တွေများတယ်) ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးတယ်။
နောက်ရက်တွေ ထမင်းမစားချင်တဲ့ အချိန်တွေမှ နေ့ လည်စာ အစားအသောက်ပုံတွေ ထပ်တင်တယ်။ အခုတော့ Lunch Time ကုန်လို့ အလုပ်လုပ်ချိန်ရောက်ပါပြီ။
Posted by Nay Nay Naing at 9/09/2010 02:04:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/08/2010 01:40:00 PM5comments
Sometimes I'm Lazy, I get bored.
Posted by Nay Nay Naing at 9/07/2010 10:52:00 AM4comments
ပျင်းလို့ရေးသည်။
အလုပ်လုပ်စရာလေးတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် စလို့ မရသေးဘူး။
သောကြာနေ့ က အလုပ်ကွန်ပြူတာမှာ HD အသစ်လဲတယ်။ ကွန်ပြူတာ သုံးရတာ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိနေလို့့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Helpdesk ကိုဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ လာကြည့်ပြီး Window OS အသစ် ပြန်သွင်းပေးမယ်၊ HD ပါလဲပေးမယ် ဆိုပြီး သောကြာနေ့ မှာ အားလုံး လာလုပ်ပေး သွားတာပါပဲ။ ပုံမှန် Standard Software တွေပဲ သွင်းပေးတာဆိုတော့ ကျန်တာတွေ ကိုယ့်ဘာသာ install လုပ်ရမယ် ပြောတယ်။ အများကြီးတော့ install လုပ်စရာ မရှိပါဘူး။ အလုပ်အတွက်လိုတဲ့ License နဲ့ သုံးရတဲ့ Software တွေ ကိုယ့် ID နဲ့Check လုပ်ပြီး ပြန်သွင်းပေးထားတာတွေ့ တယ်။ လိုတာရှိရင် ဖုန်းဆက်ဆိုလာပေမယ့် ခုထိ ကြည့်မိသလောက်တော့ သူတို့ install လုပ်ပေးနိုင်တာ အကုန်နီးပါး install လုပ်ပေးထားတာ တွေ့ တယ်။ ဒီတော့ တခြား ကိုယ်ဘာသာသုံးလေ့ ရှိတာလေးတွေပဲ ထပ် install လုပ်ဖို့လိုမယ်။
အခု Firefox၊ iTune install လုပ်ပြီးပြီ။ Zawgyi Unicode လဲ install လုပ်ပြီးပါပြီ။ အလုပ်အတွက်ကတော့ JDK install လုပ်ပြီးပြီ။ အရင်က တခြား Department ကလူတွေနဲ့ မတူ IT-DD က လူတွေမှာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကိုယ် Admin Access ရှိခွင့် ရှိတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း Policy အရ ဘယ်သူမှာ Admin Access ပေးလို့ မရတဲ့ အတွက် ပြန်လာဖြုတ်ရမယ် ပြောတာပဲ။ အခု Admin Right လေး ရှိနေတုန်း Install လုပ်ချင်တာ အကုန်လုပ်ထားပါပြောသွားတယ်။ အလုပ် ကွန်ပြူတာမှာ ဘာမှ အလုပ်အတွက် လိုတာကလွဲရင် တခြားဘာမှ ထူးထူးခြားခြား သိပ်မသုံးတော့ အဲဒါတွေ Install လုပ်တာ သိပ်မကြာလောက် ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအရင်ဆုံး Development environment တစ်ခုပြန်ရအောင် Setup လုပ်နေရတယ်။ အဲဒါ ကြာတယ်။ ပြီးရင် တခြား လိုတဲ့ Configuration တွေ ပြန်လုပ်ရအုံးမယ်။ အဲလိုတွေ လုပ်ရတာ ပျင်းစရာကောင်းတာ။ ဒီနေ့ အဖို့အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 9/06/2010 03:34:00 PM3comments
အလုပ်တွေမှာ လူဟောင်းတွေ ထွက်သွားတဲ့အခါ နှုတ်ဆက်တဲ့ "Farewell" အီမေးတွေပို့ ကြ၊ လူသစ်တွေ ရောက်လာရင် မိတ်ဆက်၊ ကြိုဆိုတဲ့ "Welcome" အီးမေးတွေပို့ ကြတာ ထုံးစံတစ်ခု ထင်တယ်။
ကြိုဆိုတဲ့ အီးမေးပုံစံတွေက ဟိုးအရင်ကလိုပါပဲ။ အဲ...နှုတ်ဆက်တဲ့ အီးမေးတွေက အရင်ကထက်ထူးလာတယ်။ ၂၀၀၉ နှစ်ဦးပိုင်းလောက်စတယ် ပြောလို့ ရနိုင်တယ်။ အရင်က ကြိုကြားကြိုကြားပါရာကနေ ခုဆို နှုတ်ဆက်တဲ့ အီးမေးတိုင်းလိုလိုမှာ ပါလာတာတွေ့ ရတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ "Find me on Facebook!" ,"Add me on Facebook!" ဆိုတဲ့ စကားနဲ့Facebook Profile URL/ Facebook Account Email Address ပါ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ အလုပ်အသစ်ပြောင်းလို့စိတ်ကူးနေသူတွေ အလုပ်ဟောင်းကလူတွေကို Farewell Email ပို့ တဲ့အခါ နှုတ်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်တယ် ဘာဘာညာညာလေးတွေ ရေးကြပြီး ဆက်သွယ်လို့ တဲ့ အရာလေးတွေပြောတဲ့အခါ အီးမေးနဲ့ဖုန်းနံပါတ်အပြင် ခေတ်မီအောင် Facebook Account လေးပါ ထည့်ပေးချင် ပေးလို့ ရတယ် ဆိုတာလေး သတင်းပေးတာပါ။
ဒါက A. VP တစ်ယောက်စီက..
We will surely meet again. Meanwhile I can be contacted at my email at xxxxx@xxx.com. You can also find me on Facebook :)
ဒါက ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် ...
I can be reached at my personal email address which is xxxxx@xxxxx.com(or Facebook). Please do keep in touch.
Wish you all be happy and well.
Add me on facebook! xxxxx@xxxxx.com
ဒါက BA တစ်ယောက်..
My email/facebook address is xxxx@xxxx.com
Do keep in touch, Thank You.
I hope to hear from you all in the future and I can be reached at
Personal Email: xxxx@xxxx.com
Facebook : www.facebook.com/xxxxx
ဒီပိုစ့်ရေးရင် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ အတွင်း လက်ခံရခဲ့တဲ့ အီးမေးတွေတစ်ချက် ပြန်ကြည့်ပြီး နည်းနည်းကူးရေးပြတာ။ ပုံစံအမျိုးမျိုး နဲ့ ပါပဲ။ အများကြီးကျန်သေးတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/03/2010 11:32:00 AM4comments